iMac Pro, iyo yakamirirwa kwenguva refu kuvandudzwa kweApple's nyanzvi renji | IPhone nhau
iMac Pro, iyo yakamirirwa-refu kuvandudzwa kweApple's nyanzvi renji
Tiri hungover kubva ku Keynote kubva kuWWDC 2017, mharidzo yakasiya vazhinji vedu tichida zvimwe, uye ndeyekuti kubva pakuona kwangu Apple haichaiti Keynotes sezvayaimboita kare ... Tiri pasi panhau, isu tinoda zvimwe, uye kunyangwe isu takatove ne Hardware yekuvandudza Keynote ndiyo quintessential software, isu tingadai takada kuve nenhau dzinoonekwa zvakanyanya. Hongu, sekukutaurirai kwatakaita Hardware nhau: itsva iPad Pro, nyowani Pod Pod, maMac matsva, uye iMac Pro nyowani…
Mac nyowani yakatarisa pamusika wehunyanzvi, uyo wakataurwa nezvayo kwenguva yakareba. Uye isu hatigone kukanganwa hunhu hwehunhu hweApple brand, inozivikanwa nekushandiswa muhuzhinji hwehunyanzvi hwekushandisa: pamusoro pezvose, odhiyo nemavhidhiyo nyanzvi. Uye kune izvi, ivo Apple vakomana vaive neayo kumusoro ruoko rwavo, iyo nyowani iMac Pro, iyo nyowani nyanzvi yemakomputa kubva kune vakomana pane iyo block. Iyi iMac Pro nyowani ichave izvo zvinotarisirwa nevakawanda? Mushure mekusvetuka tinokupa zvese zvese zveizvi zvitsva iMac Pro: Nyanzvi kune iyo nth degree.
Chekutanga pane zvese kukuudza kuti isu takatarisana neMac ine yakafanana neyawo mukoma wayo mudiki, iyo 5-inch iMac 27K, hongu, panguva ino, uchitevera Pro renji, aluminium ine Space Grey ruvara kusiyanisa kubva pamureza hapana pro. Uye zvakare, panguva ino tichava ne kiibhodhi (nyowani yeMicrosoft Khibhodi ine manhamba keypad) uye mouse nemuvara Space Grey kutevera kara ye iMac Pro pachayo.Nenzira, hapana Kubata Bhara mune nyowani yeMicrosoft Keyboard yeMac Pro, chimwe chinhu icho kunyangwe ivo vasina kusanganisira, ini handifunge kuti vachatora nguva yakareba mukuwedzera mune ramangwana kugadzirisa.
Asi chii chaizvo chinoseta iyi iMac Pro nyowani kunze kwemamwe maMacs hapana zvayakanakira, zviri pachena isimba raanaro. Kusvikira ku18-core Intel Xeon processor, Imwe yeanogadzira epamberi pamusika uyo unongova nemwedzi mishoma. Ma processor akasanganiswa neiyo nyowani AMD Radeon Pro Vega inosvika kusvika 16 GB yeHBM2 memory, chimwe chinhu chaizosvika 11 TFLOPS dzesimba imwe yekuverenga, kana makumi maviri nemaviri TFLOPS ehafu-chaiyo. Pamwe hapana chimwe cheichi chinonzwika chakajairika kwauri, asi isu tiri kutaura nezve tekinoroji yepamberi, uye zviri pachena kuti izvi zvinoitirwa vateereri vane hunyanzvi, kuti ugone kuwana zano muKeynote iMac Pro demo yakaitwa nevakomana kubva kuChiedza Chiedza & Mashiripiti, anoona nezve Star Wars zvinoonekwa zvinoitika.
Ngatitaurei tiwedzere 128GB ECC ndangariro, kusvikira 4 TB SSD yekuchengetedza, uye na ina Thunderbolt 3 chiteshi senzvimbo dzekunze dzekuenderera nekuwedzera simba: fungidzira ne 3 ekuwedzera 5K skrini, mamwe ekunze emagetsi emagetsi ... Kana iwo matatu Thunderbolt madoko uye nekuchengetera kweMac Pro kukanganisika, iwe zvakare uchave nekubatana 10 Gigabit Ethernet. Vaviri vane simba mafeni pamwe neyakafundwa kufefetedza dhizaini mune chassis haigadzirise chinhu kune iyi nyowani iMac Pro.
Zviripachena kuti zvese zvine mutengo, uye hongu, tinogona kugara tichiti unogona kuwana zvinhu zvakachipa kwehafu yemutengo, zvinoita sekunge iMac Pro inodhura asi zviri pachena kuti unofanirwa kuzvinzwisisa. izvi hazvisi zvevanhu vese, mhedzisiro ichatiudza kuti vanosvika papi kusvika ... Inotanga kutengeswa muna Zvita nemutengo unoenda kubva $ 4999 zvichienda mberi (Iwe unogona ikozvino kutamba kuti ugadzirise iMac Pro nezvose kuti uone wekupedzisira mutengo), saka izvozvi isu tangova nazvo chete mira kusvika kupera kwegore kuti tione miedzo yekutanga kuti tiwane mazino marefu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » iMac Pro, iyo yakamirirwa-refu kuvandudzwa kweApple's nyanzvi renji
Christie wekutengesa Apple yakagadzirirwa ini mwedzi uno
iOS 11 inowedzera mimhanzi kutonga kubva kuAirPods